Job 5 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
5 “Biko, kpọọ òkù! Ọ̀ dị onye na-aza gị?Ònye n’ime ndị nsọ ka ị ga-agbakwuru? 2 N’ihi na iwe ga-egbu onye nzuzu,Anyaụfụ ga-egbukwa onye ọ na-adị mfe ịrata. 3 Mụ onwe m ahụwo ka onye nzuzu na-agbanye mgbọrọgwụ,+Ma na mberede amalitere m ịbụ ebe obibi ya ọnụ. 4 Ụmụ ya nọ nzọpụta n’ebe dị anya,+A na-echikwa ha ọnụ n’ala n’ọnụ ụzọ ámá n’enweghị onye nnapụta. 5 Onye agụụ na-agụ na-eri ihe onye ahụ wetara n’ubi;Mmadụ na-ewere anụ ọ bọrọ abọ n’ebe o konyere ya,Ọnyà na-anwakwa ijide akụ̀ ha. 6 N’ihi na ihe ọjọọ adịghị esi n’ájá nkịtị epupụta,Nsogbu adịghịkwa esi n’ala nkịtị epulite. 7 N’ihi na a mụrụ mmadụ ịta ahụhụ,Dị ka ikerike ọkụ si efeli elu. 8 Otú ọ dị, mụ onwe m ga-ajụ Chineke ase,Ọ bụkwa Chineke ka m ga-enyefe okwu m,+ 9 Onye na-eme oké ihe ndị a na-apụghị ịchọpụtacha achọpụtacha,Ihe dị ebube a na-apụghị ịgụta ọnụ;+ 10 Onye na-eme ka mmiri zoo n’elu ụwa,+Onye na-ezipụkwa mmiri ka o zoo n’ala;+ 11 Onye na-eme ka ndị dị ala nọrọ n’ebe dị elu,+Ka ndị na-eru uju wee nọrọ n’ebe dị elu ha n’ihi nzọpụta ha nwetara; 12 Onye na-akụghasị atụmatụ ndị aghụghọ,+Ka aka ha wee ghara ịrụpụta ihe; 13 Onye na-ejide ndị maara ihe n’aghụghọ ha,+Onye na-emekwa ka atụmatụ ndị aghụghọ ghọọ ihe mgbagwoju anya;+ 14 Ha na-ezute ọchịchịrị ọbụna n’ehihie,Ha na-asọgharịkwa ìsì n’etiti ehihie dị ka ọ̀ bụ n’abalị;+ 15 Onye na-azọpụta mmadụ ná mma agha nke si ha n’ọnụ,Na-anapụtakwa ogbenye n’aka onye dị ike,+ 16 Ka olileanya wee dịrị onye ọ na-enweghị ka ọ hà ya,+Ma ajọ omume na-emechi ọnụ ya.+ 17 Lee! Obi ụtọ na-adịrị onye Chineke na-abara mba;+Ajụkwala ịdọ aka ná ntị nke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile! 18 N’ihi na ya onwe ya na-eme ka ndị mmadụ nwee ihe mgbu, ma ọ na-ekechi ọnyá ha;Ọ na-etijasị ndị mmadụ, ma aka ya na-agwọ ha. 19 N’ahụhụ isii ka ọ ga-anapụta gị,+N’ahụhụ asaa kwa, ọ dịghị ihe ọjọọ ga-emetụ gị.+ 20 N’oge ụnwụ, ọ ga-anapụta gị n’aka ọnwụ,+N’oge agha, ọ ga-anapụtakwa gị n’aka mma agha. 21 A ga-ezobe gị ka a ghara iji ire pịa gị ụtarị,+Ị gaghịkwa atụ mbibi egwu mgbe ọ bịara. 22 Ị ga-achị mbibi na agụụ ọchị,Ị gaghịkwa atụ anụ ọhịa nke ụwa egwu. 23 N’ihi na gị na nkume dị n’ọhịa ga-agba ndụ,A ga-emekwa ka gị na anụ ọhịa biri n’udo.+ 24 Ị ga-amarakwa na udo bụ ụlọikwuu gị,Ị ga-agakwa hụ ala anụ ụlọ gị na-ata ahịhịa, ọ dịghịkwa ihe ị ga-achọ achọ. 25 Ị ga-amarakwa na ụmụ gị dị ọtụtụ,+Nakwa na ụmụ gị dị ka ahịhịa dị n’ala.+ 26 Ị ga-aga n’ili mgbe ike ka dị gị,+Dị ka mgbe a tụkọbara ùkwù ọka* n’oge ya. 27 Lee! Nke a bụ nchọpụta anyị meworo. Otú ahụ ka ọ dị.Nụrụ ya, gị onwe gị kwa, mara ya.”